Waqtiga Akhrinta: 3 daqiiqo Waxaa laga yaabaa inaad dareentay xoogaa nacas ah qoraalkaygii dhawayd. In kasta oo daabacaadda maalin kasta ay noqotay qayb ka mid ah DNA-kayga sannadihii la soo dhaafay, sidoo kale waxaa laygu xujeynayaa hormarinta goobta iyo bixinta sifooyin badan iyo ka badan. Shalay, tusaale ahaan, waxaan sii waday mashruuc lagu dhexgalinayo talooyinka ku saabsan warqadda cad ee goobta ku habboon. Waa mashruuc aan xarigga ka jaray sanad ka hor sidaa darteedna waxaan qaatay waqtigayga qorista waxaanan u beddelay koodh
Waqtiga Akhrinta: 2 daqiiqo Sannad kasta waxaan aaminsanahay inay wax walba bilaabayaan inay isbarbar dhigaan, laakiin sannad walba suuqa si weyn ayuu isu beddelaa - 2015-na waxba kama duwana. Kordhinta mobilka, kor u kaca xayeysiiska liis garaynta alaabada, muuqaalada noocyada xayeysiiska cusub dhammaantood waxay gacan ka geysteen isbeddello muhiim ah oo ku yimid habdhaqanka macaamiisha iyo qarashyada la xiriira ee suuqleyda. Xogtan cusub ee Kenshoo waxay muujineysaa in bulshada ay si weyn ugu korodhay suuqa. Suuqyadu waxay kordhinayaan qarashka ay ku bixinayaan bulshada 50%
Waqtiga Akhrinta: 2 daqiiqo Splender wuxuu falanqeeyay in ka badan afar milyan oo macaamil ah 800 + goobood si loo arko sida wax looga iibsado khadka tooska ah sanadkii 2015 marka la barbar dhigo 2014. Maalinta Thanksgiving waxay ahayd maalintii saddexaad ee ugu weyneyd ee wax laga iibsado internetka xilli ciyaareedka iyadoo kumbuyuutaro iyo elektaroonig ay hogaaminayaan hadiyadaha laakiin dharka iyo agabyada horseedka u ah koritaanka. Cyber ​​Isniinta ayaa wali ah maalinta ugu badan ee fasaxa laga dukaameysto internetka, oo leh 6% iibka fasaxa. Si kastaba ha noqotee, iibku wuxuu hoos u dhacay 14% illaa 2014. Fikradayda, halkaas
Waqtiga Akhrinta: 2 daqiiqo Wow, maxaa sanad ah! Dad badan ayaa laga yaabaa inay eegaan tirooyinkayaga oo ay ku jawaabaan meh… laakiin kuma faraxsanaan karno horumarka goobta ay ku tallaabsatay sanadkii la soo dhaafay. Naqshadeynta, dareenka ku kordhay tayada boostada, waqtiga ku qaatay cilmi baarista, dhammaantood wax weyn ayey iska bixinayaan. Dhamaanteen waan sameynay anaga oo aan kordhin miisaaniyadeena isla markaana aan iibsanin wax taraafiko ah… tani waa koritaanka dabiiciga ah! Ka dhaafida fadhiyada ilaha spam gudbinta, halkan waa tan
Khamiista, Diseembar 17, 2015 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: 2 daqiiqo Lix sano ka hor, caqabadda ugu weyn ee suuqgeynta internetka waxay ahayd awoodda isdhexgalka, toosinta, ka dibna xakameyneysa farriimaha dhan kanaal kasta. Markii ay soo baxeen wadiiqooyin cusub oo ay caan ku noqdeen, suuqleyda waxay ku darsadeen qaybo badan iyo qaraxyo badan jadwalkooda wax soo saar. Natiijada (oo wali ah mid caadi ah), waxay ahayd xayeysiis aad u fara badan iyo farriimaha iibka oo hoos u dhigaya hunguriga rajo kasta. Dib-u-celinta ayaa sii socota - iyadoo macaamiisha murugaysan ay ka baxayaan kana qarin doonaan shirkadaha ay iyagu leeyihiin